1. Kwabanye abasebenzisi beMac abangakazi ukuthi bangasithatha kanjani isithombe-skrini noma bamane basibize ngokuthi isithombe-skrini. Kulabo abafuna indlela yokuthwebula izithombe-skrini, kufanele ufunde le ndatshana .. Ngoba ukuthatha isithombe sesikrini sonke sewindi noma ingxenye nje yesikrini Akunzima njengoba ucabanga! Ungasithatha kanjani isithombe-skrini kwi-Mac Enye yezinkinobho ezibaluleke kakhulu okufanele sizisebenzise yilezi: ● umyalo ● ishifti ● inombolo 3 ● inombolo 4 ● inombolo 6 ● ibha yesikhala lapho okhiye bakhona. Futhi ungayithola kanjani ngawo wonke amamodeli we-Mac afana neMac Pro, iMac, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini. Ake siqhubeke nezinye izindlela zokuthatha izithombe-skrini. Yikuphi okudingeka ucindezele ngasikhathi sinye? Ngabe ikhona ifomethi lapho singathatha khona izithombe-skrini?
2. Thwebula isithombe lapho usifuna khona ngokwenza ngokwezifiso isifunda saso. Cindezela bese ubamba okhiye be-Command and Shift bese ucindezela inombolo 4. Uma ucindezelwa ngasikhathi sinye, iMac yakho izokhombisa uphawu +, bese uchofoza bese ubamba igundane bese uhudula indawo oyifunayo. Thatha isithombe-ke Lapho indawo oyifunayo isiqedile, dedela igundane, elifanele lapho sifuna ukuthatha indawo ethile. Uma uzwa umsindo we- "Snap", kusho ukuthi ukuthunjwa kuqedile. Isithombe esithunjiwe sizogcinwa kudeskithophu ngokushesha.
3. Thwebula isithombe sewindi lamanje. Ukucindezela bese ubamba okhiye be-Command and Shift, cindezela inombolo 4 bese udedele zonke izandla. Kulandelwe i-Spacebar (+ kuzovela uma ungacindezeli i-Spacebar) lapho wenza isithombe sekhamera. Chofoza ewindini olifunayo ukuze uthwebule isithombe, esifanele ukuthwebula iwindi elithile lohlelo ngalunye. Uma uzwa umsindo "we-snap", kusho ukuthi ukuthwebula kuqedile Isithombe esithunjiwe sizogcinwa kudeskithophu ngokushesha.
4. Thatha isithombe-skrini se-Mac yonke kusikrini esigcwele Ukwenza lokhu, cindezela bese ubamba okhiye be-Command and Shift, bese ucindezela inombolo 3. Lokhu kuzovumela ukuthatha isithombe esigcwele sokuthwebula. Konke okuvulekile kuleso sikrini kuzokhonjiswa ngokuphelele. Kufanelekile uma ufuna ukubona sonke isikrini. Uma uzwa umsindo "we-snap", kusho ukuthi ukuthwebula kuqedile. Isithombe esithunjiwe sizogcinwa kudeskithophu ngokushesha.
5. Thatha isithombe seTouch Bar kumamodeli we-MacBook Pro eza neTouch Bar.Uma noma ngubani osebenzisa iMacBook Pro eza neTouch Bar, kuzothuthuka kancane ngoba iMac nayo ingathatha isithombe-skrini seTouch Bar nayo !! Wow. Ungacindezela futhi ubambe kanjani okhiye be-Command and Shift bese ucindezela inombolo 6 uma uzwa umsindo othi "Snap" kusho ukuthi ukuthwebula kuqedile. Isithombe esithunjiwe sizogcinwa kuDeskithophu ngokushesha, enye inqubo ukusikisela ukuthi uma ufuna ukuhlela isithombe esithunjiwe ngokushesha, ungasenza lapho i-cap isiqedile, ngoba iMac izosikhombisa isithombe ngaphambi kokuyigcina ku-Desktop. Uma ufuna ukubhala noma ufuna ukumaka amaphuzu abalulekile Ingalungiswa ngokushesha, ilungele noma ngubani ofuna ukwazi amanye amasu wokusebenzisa iMac, ungakhohlwa ukucindezela nokulandela ndawonye. Qinisekisa ukuthi unamasu amaningi amahle!